I zityalo | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Iifoto zezityalo - ujonge uluntu kwifowuni
Amaphepha amaninzi malunga nezityalo
Iifoto zezityalo zendalo
Izityalo, izihlahla, utshani nemithi - zonke ziyinxalenye yendalo yethu enhle. Kubantu abaninzi, zibonakalisa ubuhle kwaye zenza indawo ekhululekile, kwimeko yokuphila kwansuku zonke ye-21. Century.
Izityalo - Iindawo ezintle kakhulu zendalo
Jonga nje kwiidolophu ezinkulu zeplanethi yethu. Kwisixeko saseNew York, ngezinye iindlela "umama" wazo zonke iidolophu ezinkulu, kukho i-oasis enkulu eluhlaza kwintlalo esebenzayo kwiCentral Park.
Inyaniso yokuba indawo enkulu kwenye yezona zixeko ezidumileyo kwihlabathi zisetyenziselwa ipaki ephezulu, ngoko ke akukho ndawo yokukwakha iofisi kunye nezakhiwo, ezibonisa ukubaluleka kwezityalo kunye nemvelo ngokubanzi.
Kodwa sibuya kwiSixeko saseNew York siye kwiidolophu nakwiidolophini zelizwe lethu. Abantu abaninzi banokubaluleka kakhulu kwintsimi kunye nendawo eluhlaza xa befuna ikhaya okanye indlu. Akumangalisi, emva kwakho konke, uziva ukhululekile phakathi kwendawo yokulima ebunayo, ukhulula kwaye ukhohliwe iingxakini zobomi bemihla ngemihla.
Amathuba amaxesha - ummangaliso wemvelo
Kodwa kungekhona nje ihlobo elenza iintliziyo zethu zibethe ngokukhawuleza. Njalo ixesha linomtsalane kunye nekhontrakthi. Iindwendwe ze-Snowy kunye nemithi ebusika zilandela ulwandle oluphuzi, i-orange kunye nobomvu ekwindla. Xa iintsuku zifudumala kwakhona, iifama zokuqala zihluma emithini engenanto kwaye izityalo zokuqala ziqala ukuvelisa ubuhle bazo.
Kwaye kwanezindonga zethu ezine, sithandabuza nje ukwenza ngaphandle kwendalo. Ukuqala ngeentlobo ezincinci ezitshiweyo kwizityalo zasemanzini kwi-aquarium ukuya entendeni ephakamileyo yesundu, phantse elowo wethu unesityalo njengento yokuhlobisa ekhaya lethu. Ekubeni imvelo, nangona yinto nje yento yokwenza izityalo ezibonakalayo, kuphela ezimbalwa kuthi sifuna ukwenza ngaphandle.
Akukho nto, iifoto ezininzi zokukhumbuza nazo zenziwe ngendalo. Kodwa kwanemifanekiso ekhupha imvelo yethu enhle, yenza isikhalazo esikhethekileyo kwaye asikho kuphela kwiindawo ezininzi zokuhlala. Ngokukodwa kwiikhompyutheni okanye kwiifoto ze-smartphone zezityalo zethu ezithandekayo nemithi bayonwabile kakhulu ukusebenzisa.
Ngenxa yesi sizathu, siyavuya ukubonisa ukhetho oluhle lwezithombe zezityalo ezingezantsi.
Kakade ke, iifoto azikwazi ukutshintsha indawo yangempela. Ukuba ufuna ukufumana umboniso obalabalakileyo kunye nohlobo oluthile lwendalo yethu ngokugcwele, kufuneka uhambe ngqo emoyeni omtsha. Nangona kunjalo, iifoto zezityalo kwiziko lethu zilungele ixesha lokubanda kunye nezobuhlungu kwaye zingaphinde zizise indawo yokuhlala ekhaya kubantu abavela kwisixeko esikhulu abahlali kwiindawo zasemaphandleni.
I zityalo egadi
Ncoma nge inyosi
Ukubala imibala yezityalo